Ọnwụ - know maara usoro ọhụrụ nke Amazon Prime? | Bezzia
'Ọnwụ': Usoro ọhụrụ nke Amazon nke ga-emeri gị
Susana godoy | 30/03/2021 14:00 | Akụkọ
Eziokwu bụ na enwere ọtụtụ aha na-abịa n'igwe okwu. Ya mere, ọ dịghị ihe dịka ịkụ nzọ na ụfọdụ n'ime ewu ewu na nke a, anyị nwere nke ọ bụ. 'La Temperance' rutere na Amazon Prime ma bụrụrịrị otu n'ime nnukwu ihe ịga nke ọma, nke onye ọ bụla na-ekwu maka ya.
Ọ bụghị n'ihi na obere! N'ihi na ọ bụ ihe echiche nke sitere na akwụkwọ akụkọ nke María Duemonyas. N'ime ya, anyị nwere ike ịnụ ụtọ oge ejije nke jikọtara ntọala sitere na Jerez ma ọ bụ Cádiz n'etiti ndị ọzọ. Ya mere o yiri ka ọ ga-abụ ezi ntọala ịnụ ụtọ ihe niile ọ ga-agwa anyị yana ịkọwapụta nke ọma n'ihe odide ya.
1 Gịnị bụ 'Ọnwụnwa' banyere
2 Ihe mere usoro Amazon Prime ga-eji jikọọ anyị
3 María Dueñas na-aga n'ihu na-aga nke ọma na obere enyo
4 Ọganiihu nke dịlarị aka uwe ya
Gịnị bụ 'Ọnwụnwa' banyere
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ejije akụkọ ihe mere eme, nke ga-eme ka anyị nọrọ nso na sofa. Akụkọ a na-elekwasị anya na ezinụlọ Montalvo bụ ndị nwere nnukwu nketa, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha raara onwe ha nye maka azụmahịa mmanya ma ha nwere wineries nke di nso Jerez de la Frontera. Anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ nnukwu ebe ndị a niile na usoro a, yana oke ama ama ama ama ama ama. Ma na mgbakwunye, akụkọ a lekwasịrị anya n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa ma na Mexico na Cuba ma na-echezọghị London. Eeh, ọtụtụ ihe atụ mana otu eriri na nsonaazụ ga-eju gị anya. Azụmaahịa ezinụlọ, ọdịnala, ego na ihe nzuzo ga-abụ akụkụ nke atụmatụ nke usoro Amazon Prime.
Ihe mere usoro Amazon Prime ga-eji jikọọ anyị
Dịka anyị na-ekwu, 'La Temperance' bụ ihe nkiri mana ọ na-ezobekwa akụkọ ịhụnanya mara mma. Soledad Montalvo metụtara ndụ nke ọ kwadobeghi maka ya, maka na ọ bụ nwata na n'ihi na ọdịmma ya jikọtara onye ọzọ. N'aka nke ọzọ, Mauro makwaara ihe mgbu site na nwata na akara aka chọrọ ka ha abụọ dịrị n'otu. Nke mbụ site na azụmahịa ụwa kamakwa site na ezinụlọ. A ga-ahụkwa esemokwu ezinụlọ dị iche iche na mmekọrịta ọha na eze na usoro a. Ndị protagonists na ọrụ ha ga-abụ otu n'ime nnukwu ihe mere ị ga-eji banye na usoro ahụ. N'otu aka e nwere Leonor Watling na n'akụkụ nke ọzọ Rafael Novoa. Otu n'ime ha bụ Juana Acosta ma ọ bụ Raúl Briones, onye nwekwara ọrụ kwesịrị n .omi.
María Dueñas na-aga n'ihu na-aga nke ọma na obere enyo
Ọ dị ka mmegharị nke akwụkwọ María Dueñas bụ nnukwu ihe ịga nke ọma. N'otu aka anyị nwere 'Oge dị n'etiti etiti' onye jisiri ike jide anyị abụọ n'ụdị akwụkwọ na emesịa na usoro telivishọn. 'La Temperance' bụ usoro sitere na 2015 nke na-agwa anyị banyere oge ọzọ, mana banyere njem, ọchịchọ na ikpokọta ihe na njedebe, ga-abụ ihe ịga nke ọma anyị kwuru. Ya mere, ọ bụkwa ihe ọzọ na ndị ọma dị ka ya ụzọ. O nwekariri ike nke ndi nwanyi kamakwa romances na oghere di iche nke bukwara ihe ozo di nma ileba anya.
Ọganiihu nke dịlarị aka uwe ya
Ọ bụ eziokwu na echiche nke mmegharịrịrịrịrị karịa echiche. Mana emebeghị ya n'ihi na, n'ezie, ọ chọrọ ka emezu ya nke ọma. Ọ dị ka ụfọdụ data arụtụla uche n'echiche ahụ bụ na ebidoro mebie echiche a karịa afọ 4 gara aga. Typesdị mmepụta ndị a ka ekwuru na ha na-achọ nnukwu ihe, n’ihi na e nwere ọtụtụ ebe ị ga-ese ihe nkiri, tinye akụkọ ndị ga-agbasa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nke na-ahapụ nnukwu ìgwè n'azụ ihe nkiri na-arụ ọrụ niile siri ike. N'ihi ya, ruo mgbe e jikọrọ ihe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, echiche siri ike nke ịmanye ya na ime ka ọ pụta ìhè ekweghị. N'ezie, ọ na - apụta n'oge zuru oke, n'ihi na 'La Templanza' ga-achọ gị aghụghọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » 'Ọnwụ': Usoro ọhụrụ nke Amazon nke ga-emeri gị
Iberibe afọ na-enweghị isi ọ bụ ezi echiche ma ọ bụ echiche ọjọọ?
Igodo iji zere isi ísì ọjọọ n'ụlọ